Wondershare Product Sigasị nke Multimedia, PDF, Business Software
Ike Ngwaọrụ ọ bụla nwere ike nna ukwu
News ime ụlọ
Nkesa & Nkwusa
OEM Onye Mmekọ
Corporate Ibu Ọrụ
Software N'ihi Ụlọ Akwụkwọ
Wondershare Software Co., Ltd., guzobere na 2003, na-headquartered na China, na alaka ụlọ ọrụ dị USA, Germany, Japan na Hong Kong, China. Wondershare Ngwaahịa mbio multimedia ngwaọrụ, dakọtara na dị iche iche nyiwe gụnyere Mac na Windows, ka otutu-eri-irè software na azụmahịa na PC utilities.
Video & DVD Ngwaọrụ
Video & DVD ngwá ọrụ a ìgwè nke otutu na mfe na-eji ngwá ọrụ nke i nwee ike iji tọghata DVD ma ọ bụ tọghata videos ndị ọzọ formats na ọtụtụ ndị ọzọ na-edezi ọrụ, ma mee ka ị na-enwe ma ọ bụ ịkọrọ gị vidiyo na ihe adaba ụzọ.
Ugbu A Product Sigasị: Video & DVD Ngwaọrụ, Video & DVD Ngwaọrụ n'ihi Mac. PDF Ngwaọrụ PDF Ngwaọrụ pụrụ inyere gị aka ngwa ngwa na-adị mfe tọghata PDF faịlụ (gụnyere echebe PDF faịlụ) ndị ọzọ formats, gụnyere Okwu, Excel, PPT, HTML, wdg na mbụ ọcha debeere, na-enyere gị aka idezi ma iwerekwa faịlụ mgbe akakabarede. Ugbu A Product Sigasị: PDF Ngwaọrụ.
ọzụzụ ngwá ọrụ na-otu ìgwè nke ngwaọrụ nke ga-eme ka mma ka ọrụ gị, gụnyere eke dị iche iche quizzes ma ọ bụ demos maka dị iche iche ojiji, na-eme gị ngosi mma na-akọrọ ma chebe site na-ere ọkụ PPT ka mara mma DVD, videos, ma ọ bụ flash.
Ugbu A Product Sigasị : Ọzụzụ na ngosi ngwaọrụ. PC Utilities PC Utility Group bụ ihe inyịme ngwaahịa akara nke bara uru na oké ọnụ ngwaọrụ maka usoro optimizing, data ndabere na mgbake, nke aka mfe na n'ụzọ zuru okè chebe gị PC ma ọ bụ gị faịlụ. Ugbu A Product Sigasị: System Optimizer & Data Recovery. Macintosh Software Macintosh software ìgwè na-enye a nso nke ngwaahịa maka Mac ọrụ, gụnyere keukwu video na DVD akakabarede software, DVD e kere eke ngwaọrụ, dijitalụ foto album eso, na ngwa maka iPod, iPhone, wdg Ugbu A Product Sigasị: DVD & Video converters n'ihi na Mac. Mobile Ngwa Group Dị ka a na-arụkọ ngwaahịa akara maka Wondershare software dabeere na PC na Mac, Wondershare ngwa mkpanaaka ìgwè awade ọrụ ngwa ọdịnala na-arụ ọrụ na iPhone na Android maka ntụrụndụ. Ugbu A Product Sigasị: iPhone Ngwa, Android Ngwa.